Ihe ojoo ohuru di na gam akporo zuru ohi na kaadi gi | Akụkọ akụrụngwa
New malware zuru ohi gị na kaadị data
José Alfocea | | Noticias
Ọzọkwa, anyị enwelarị ọnụ ọgụgụ, ndị ọrụ gam akporo bụ ndị, cheta, nwere oke ahịa nke na-akọ ihe dị ka 85% nke ngwaọrụ mkpanaka, na-emetụta ọnụnọ malware ọzọ na, na nkenke, nwere ike ersonomie ihe ziri ezi ngwa ọdịnala na-ezu ohi gị ụgwọ nkọwa were ego gị "gawa" zụọ ahịa.
Ọ bụghị n'ezie ihe iyi egwu ọhụrụ, mana a ihe kachasị dị elu, ọkaibe ma dị egwu nke malware amaara ama ebe ọ bụ na ọ bụ ọbụna ike nke impersonating nkwenye SMS na-ezu ohi data, n'aka na debit kaadị, na akụ akaụntụ si ọrụ.
1 Egwu dị egwu dị ka amabeghị ya
2 Kedu ka malware ọhụrụ a si arụ ọrụ gam akporo?
Egwu dị egwu dị ka amabeghị ya
Ruo ihe karịrị otu afọ ịdị adị nke Trojan-onye ụlọ akụ.AndroidOS.Faketoken. Otú ọ dị, ndị okike nke gam akporo malware jisiri ike mee ka ọ zuo oke na ọkwa ọkaibe dị otú a na ọ kpọlitere mkpu n'etiti ndị ọkachamara nchekwa cyber. Nke ukwuu nke mere na Ndị nchọpụta ka na-eche etu ha si nweta malware dị egwu.
Ihe kachasị njọ banyere iyi egwu ọhụrụ a bụ na ndị ọkachamara amabeghị otú ọrịa ngwaọrụ si eme. Site na SecureList ha na-akọ ndị nyochara malware ahụ ma jiri nwayọ na-abanye na koodu ya ma na-amụtakwu banyere ya, agbanyeghị, ọ na-esiri ike ịchọta "ọgwụ mgbochi" mgbe amaghị ụzọ ọrịa. Na nke a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ bụ iyi egwu ama, mana, anyị na-ekwusi ike, dịwanye mma na ọkaibe.
Dị ka anyị kwuru n'elu, Trojan-Banki.AndroidOS.Faketoken Ọ bụ malware amaara ama nke obodo cybersecurity ihe dị ka otu afọ. N'ezie, ọ gụnyere ya na ndepụta nke nje maka gam akporo na ụfọdụ antivirus ugbua nwere usoro megide ya. O sina dị, mbipute ọhụrụ a dị ike karị ma dị egwu, nke mere na mmetụta ya ka amabeghị. Ka anyị cheta na "agha" a n'etiti nje na antivirus, n'etiti iyi egwu na cyber na azịza, ọtụtụ na-aza egwuregwu nke "pusi na òké". Ndị Cybercriminal na-abụkarị otu ụzọ n'ihu ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa. Ọ bụ ọnọdụ ezi uche dị na ya, dị ka ọ dị na ndụ n'onwe ya: otu esi achọta ọgwụgwọ maka ọrịa nke amaghị ama ịdị adị ya? Isi ihe dị na ọsọ ịmara na ịghọta iyi egwu na, karịa ihe niile, ịchọta na itinye ngwọta dị irè. Maka oge ahụ, ndị ọkachamara na cybersecurity ka na-eju anya site na arụmọrụ na ebumnuche nke malware a mere ọkaibe.
Kedu ka malware ọhụrụ a si arụ ọrụ gam akporo?
Nke a ọkaibe ọhụrụ version nke Trojan-Banki.AndroidOS.Faketoken A na-etinye ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo ma, mgbe ọ zoochara onwe ya ka ọ ghara ịhụ ya, ọ malitere ịrụ ọrụ na-enweghị onye ọrụ hụrụ ya. Maka ya, ọ nledo niile ngwa na onye ọrụ na-amalite na oku nile mere, Ndekọ a ọrụ na mgbe e mesịrị na-eziga na-amaghị ihe nkesa na-, karịsịa ụdị ozi ọ bụla metụtara na kaadị kredit, ihe ndekọ ego ụlọ akụ, na ihe ndị ọzọ.
Ma ezigbo ihe ize ndụ dị na eziokwu na nke a malware overlays na ngwa ụlọ akụ ndị ọzọ na ịkwụ ụgwọ ziri ezi. Ya mere, ebe onye ọrụ ahụ kwenyere na ha na-abanye data ha na ngwa mbụ, ihe ha na-eme bụ inye ụlọ akụ ha, ịkwụ ụgwọ, na ozi ha na cybercriminal ndị a. N imomi bụ kpam kpam: imewe, na agba, Akara ókwú, wdg yiri nke mbụ ngwa.
May nwere ike na-eche na, n'agbanyeghị eziokwu na nke a malware bụ ike nke na-ewere gị akụ na ugwo nkọwa, gị akụ si SMS nkwenye usoro, nke na-eziga a nkwado koodu gị ama oge ọ bụla ị na-eme ka a zụọ, ga-egbochi ohi. O di nwute, nke a abughi ikpe ebe obu a malware nwekwara nledo na SMS ozi na bụ ike i copomi ndị a Koodu ma zipụ ha na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ nke ahụ ị gaghị amata ihe na-eme ruo mgbe ị hụrụ ọdịda adaala na akaụntụ gị.
Ọ na-egosi na agbasa malware ahụ site na ozi ntinye foto nke dị na ya. Kpọrọ ihe, ọ bụ na anyị amụtabeghị ihe ọ bụla? Emeghela ozi nke onye na-ezigara ya na-amaghi, ihichapụ ya ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » New malware zuru ohi gị na kaadị data
Ngwaọrụ ndị a na-acha na Apple Store na Sol
XBox One X: dị site na Nọvemba 7 na 499,99 euro